Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - စိတ်ဓါတ်များဇယား (ED) နဲ့တစျခုလုံးကို reboot ၏အနှစ်ချုပ်,
မရှိတော့ကြောင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED မှအောင်မြင်စွာကွန်ဒုံးသုံးလို့ရတယ်သောဤကောင်လေး, ဘယ်လိုအကြောင်းမကြာသေးမီကသိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်လျှောက်ထား superstimuli ဦးနှောက်၏အပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုထုံနိုင်ပါတယ် ဒီနေ့ရဲ့ hyperstimulating porn ကိုအသုံးပြုခြင်းရန် သူ၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်သူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ rebooting အတွေ့အကြုံသည်ကွဲပြားသော်လည်း (ပြန်လည်ထူထောင်မှုသည် ၄ ​​ပတ်မှ ၁၂ ပတ်အထိ) ရှိသော်လည်းသူ၏အတွေ့အကြုံမှာပုံမှန်ဖြစ်ပြီးသူ၏အချက်အလက်များသည်အထူးသဖြင့်စေ့စေ့စပ်စပ်။ ဤတွင်သူ၏ဘလော့ဂ်မှကောက်နုတ်ချက်များရှိသည်။
[အပတ် 2] ဒါကြောင့်ငါ PMO မရှိ (porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / အော်ဂဇင်) ၏ 10 ရက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ပထမ ၅ ရက်သည်ခက်ခဲသော်လည်းအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဟာအရမ်းကိုချိုလွန်းနေတယ်။ ငါဟာနှစ် ၂၀ ကျော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်နေသလိုမျိုး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကငါ့ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ စိုက်ထူရုံမိန်းကလေးငယ်များကိုကြည့်ခြင်း, ငါဘားထဲမှာစကားပြောခဲ့သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုနမ်းကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်အလွန်ခဲယဉ်း။
ထို့နောက် ၅ ရက်အကြာတွင်အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါကပြားနေတယ်၊ ​​ထုံနေတယ်၊ ​​ဘာမှမရှိဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံလိင်စိတ်ဓာတ်၏မီးပွားများ၊ ငါစိတ်ဓာတ်ကျမယ်လို့မပြောဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအနာဂတ်ကိုအကောင်းမြင်တယ်၊ ငါသွားတဲ့လမ်းကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုများသောအချည်းနှီးသော null ။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်ရလိုသောမိန်းကလေးများ၊ ယခုကျွန်ုပ်စာပို့ခြင်းဟုပင်မခံစားရပါ။ ဒေါသထွက်တာ၊ လိင်၏အလားအလာကိုနှစ်သက်စရာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကအဲဒါကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်တွန်းအားတွေရပ်တန့်သွားတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ညစ်ညမ်းမှုသည်နောက်တဖန်မရှိတော့ကြောင်းကိုယခုအချိန်ထိမသိသေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အစစ်အမှန်ဘ ၀ မှမိန်းကလေးများအားစိတ်လှုပ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်အားခွင့်မပြုသေးပါ။ ငါထင်တာကတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရာရာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာနဲ့အမျှ horniness နဲ့နှိုးဆွမှုတွေပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်။
နေ့ (၁၀) မှာဖြစ်ရတာငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ နေ့ (၃) ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတောင်မှငါတောင်မှမသိခဲ့ဘူး။ ငါဟာဒီလောက်ကြာအောင်မစီးဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် တကယ်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာနေ့ ၁၆ ရက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုမကြည့်ခင်တစ်ပါတ်မှာမကြည့်တော့တာပါပဲ။
[အပတ် 3] ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာငါ resensitization ဌာနတိုးတက်မှုမရှိခြင်းနှင့်အတူတော်တော်စိတ်မရှည်လာတယ်။ ဆိုလိုတာကတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သာအလေ့အထပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဘယ်ကြောင့်ငါကကျော်ရရန်ဤမျှကာလပတ်လုံးတာနေပါတယ်? ထိုအခါမူကားငါသင်္ချာကိုပြု၏။ အနှစ် ၂၀၊ တစ်နှစ် ၃၆၅ ရက်၊ P အပါအ ၀ င်အများစုမှာ PMO ၇၀၀၀ ကျော်သာရှိသည်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုငါကြည့်ပြီးနေပြီ။
[အပတ် 4] P နေ့မှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်များသို့ရံဖန်ရံခါ REALY STRONG flashback ကိုရယူနေတုန်းပဲ။ အစပိုင်းမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကဒီ Flashbacks တွေရလာတာကိုငါမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်။ နောက်တော့ဒါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ သင်အောင်မြင်စွာခုခံတွန်းလှန်သည့်အခါတိုင်းယင်းတို့မှလွတ်မြောက်ရန်ခြေတစ်လှမ်းနီးကပ်စေသည်။ ဒီအရူးဂိမ်းထဲမှာတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပါပဲ။
အများကြီးမောင်းနှင်ခဲ့ - ညဥ့်နက်သောအားဖြင့်မောင်းနှင်မှုဒီ crappy လုပ်ငန်းစဉ်၌ငါ့ solace တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအိမ်ပြန်လာပြီး ဦး ချိုများနှင့်ပြည့်နေသည့်အချိန်တွင်ကားထဲဝင်ပြီးနာရီအနည်းငယ်ကားမောင်းသွားသည်။ လမ်းလွဲနေသောလမ်း၊ အချို့သောတောင်ကုန်းများ၊ ရံဖန်ရံခါအဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုပေါ်တွင်သာ။ တကယ်အရေးမကြီးပါဘူး အဲဒီမှာထိုင်နေလိုက်တာကအလုပ်ရှုပ်နေလို့ငါ့ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့သက်သာစေပုံရတယ်။ အခြားသူကဒီဟာကိုလုပ်သလား
[အပတ် 5] ငါဒီနေ့ကောင်းသောစိတ်နေစိတ်ထားရှိသည်။ ၇ နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိခဲ့တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ထိုအခါငါဆိုလိုဘူး, အထူးသဖြင့်ကြီးမြတ်ဘာမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ပေမယ့်လုံးဝအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ။ ငါရေပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့အချိန်ကြာပြီ။ ငါအဲဒီမှာရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ၇ နှစ်လောက်ငါမတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး၊ ဘဝဟာမူလကမှောင်မိုက်ပြီးစိတ်မ ၀ င်စားဘူးလို့စဉ်းစားမိတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရကျွန်တော်ဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကငါဟာထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရလို့ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ် ဤနေရာတွင်ရှိဝမ်းမြောက်ခြင်းအစုအဝေး, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းခဏတာ။ ဒီနေ့၊ ငါနောက်ဆုံးတော့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရတာ၊ လူတွေနဲ့စကားပြောရတာ၊ ဆက်သွယ်တာ၊ ဆက်သွယ်တာသိပ်ကောင်းတယ်။ ငါအရမ်းသတိရတယ်၊ အခုဘယ်လောက်ပြန်အရသာရှိပြီဆိုတာကိုငါသာသဘောပေါက်ပြီ
ငါပြproblemနာ PMO အရာဖြစ်ခဲ့သည် 100% သေချာပါတယ်။ အတော်လေးရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်အရာအားလုံးငြီးငွေ့စရာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ M သည်သူ့ဘာသာသူအသက် ၁၈ နှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်အားတောက်ပအောင်လုပ်ရန်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ သို့သော် Broadband PI သည်နောက်ဆုံးတွင်မည်သည့်အရာကမှမဆိုကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုသေစေသည်ဟုထင်ပါသည်။ ငါနည်းနည်းချဲ့ကားပြောတာပေါ့၊ ငါလွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်ကလူပေါင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုပုံရမယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ငါလုပ်သင့်သလိုခံစားခဲ့ရလို့လုပ်နေတာ။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။
ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါဟာမကြာခဏမိုးရွာနေပြီလို့သင်ထင်တဲ့အချိန်မှာငါဟာတစ်ချိန်လုံးမိုးသီးစက်စက်ကျလာပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေခံစားလာရပေမဲ့မသေချာဘူး။ ဒီနေ့ငါဟာအမြဲတမ်းတည်မြဲနေပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာမှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့စိတ်မရှိတဲ့ပထမဆုံးနေ့ပါ။ ၈ နာရီလောက်ပိုများတယ်၊ ငါခံစားနေတုန်းပဲ။ ငါ (ငါအနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်, ဒါပေမယ့်ငါသိရန်ယခုအလုံအလောက်ယခုဤသိရန်လုံလောက်သောအတွက်အာရုံကြောဓာတုချိန်သီးမြင်ရပြီ) နောက်တဖန်အနိမ့်များရှိလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခု, ဒီတော်တော်လေးသူကပြောတယ်ကောင်းသောခံစားရတယ် ... ။
လူတိုင်းအားသန်နေပါ။ ဒါဟာလုံးဝကျိုးနပ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ပဟေpိထဲတွင်တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်နိုင်သော်လည်းသင် PMO ကိုလုပ်နေပါက၎င်းသည်မထင်မှတ်သောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်လိမ့်မည်။
[အပတ် 6] ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ငါတကယ်ပုံမှန်ပြန်ခံစားရသည်။ ငါမေ့လျော့ကြောင်းနောက်ဆုံးရက်ပေါင်း 40 မှာတဏှာခံစားရတယ်, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းပြချက်မရှိဝမ်းနည်း, ဒါမှမဟုတ်ညီမျှမှု, စိုးရိမ်ပူပန်, ဒါမှမဟုတ်လွန်ကဲကဲ horny, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝသေပြီ, ဒါမှမဟုတ်ဤအရာတစ်ခုခုကို၏ပေါင်းစပ်ခံစားမိဖို့ငါလေ့ရှိတယ်ငါ အမြဲအဲဒီလိုခံစားခဲ့ရဘူး ထိုအခါ3ရက်အကြာကအားလုံးပဲရပ်တန့်။ အဲ့လိုပဲ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်၏ဂျာနယ်တွင်“ Wow - ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်သာမန်” အဖြစ်သာဖော်ပြနိုင်သည့်အရာကိုခံစားမိသည်။ ထိုခံစားချက်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေပြီးအရူးတစ်ယောက်မျှပြန်မလာပါ။
အခုတော့တဏှာပျောက်ကွယ်သွားရုံနဲ့ငါ့ ဦး နှောက်ကိုကုသပေးပြီလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါကလည်းကျွန်မဟာပြန်လည်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ ပတ်ကဒီသားရဲကိုကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါကပိတ်ပစ်လိုက်ပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကတချို့အဆင့်တွေမှာသိမ်မွေ့စွာခေါက်လာပြီးထပ်ခါထပ်ခါမဝင်ရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ငါရာသက်ပန်သတိဝီရိယကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆောင်ပုဒ် - မိန်းမများသာလျှင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းဘို့အတွက်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကတော်တော်စိတ်ပျက်အားလျော့နေဆဲဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ပတ်လောက်ကြာအောင် ဦး နှောက်ပြန်သက်သာလာအောင်လုပ်ပေးမယ်။ (ငါက wimp တစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာတစ်ခုခုကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသလိုခံစားရတယ်)၊ ပြီးတော့ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင်တွန်းနိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် လွန်ခဲ့သော ၆ ပတ်ကဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သောဘဝ၏အခြားကဏ္areasများတွင်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
[ရက်ပေါင်းတစ်စုံတွဲအကြာတွင်] ဒီနေ့တကယ်စိတ်ဓာတ်ကျ ငါဘ ၀ ၌လမ်းခရီး၊ ယခုငါရောက်နေပြီနှင့်ရှေ့ဆက်သွားရန်စွမ်းရည်များကိုဒေါသတကြီးပြင်းထန်စွာဝေဖန်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်စရာမီနူးမှမှားယွင်းသောအပျော်အပါးကိုငါဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သော်လည်း၊ အခြားရွေးချယ်စရာများသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ကျေနပ်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်အစားထိုးစရာမရှိသေးပါ။ ဒါ့အပြင်ဒီ PMO ခုခံအားလုံးပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြီးငွေ့နေပါတယ်၊ ဒီနေ့ငါဟာရွှင်လန်းဖို့ခွန်အားမရှိဘူး။ သို့သော်တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုသည်အမှန်ပင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်သို့ ဦး တည်သည်ဟုခံစားရသည်၊
ငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့နောက်အချက်တစ်ခုကတော့သီတင်းပတ် ၆ ရက်ကုန်မှာအရမ်းသိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ဒီ bullsh * t အားလုံးပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ ကြည့်ရသည်မှာအရူးကာလကုန်ဆုံးသွားပြီဟုဆိုလိုသည်။ အခုတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့အစားထိုးလိုက်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုနဲ့ပေါင်းပြီးမိန်းမတွေနဲ့အတူအောင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲစေတယ်။ အတွင်းပိုင်း ၀ မ်းနည်းမှုကိုငါပြောနေလို့ပါ။
[အပတ် 7] “ မိုက်မဲတဲ့တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှု - ရက် ၅၀ နှင့် PMO ပျောက်ဆုံးနေဆဲ” P ကိုလက်လွတ်ဖို့ရက်အနည်းငယ်ကြာသည်။ ဒါပေမယ့် ၇ ပတ်အကြာမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒုတိယကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခုလည်းရှိနိုင်သည်။ ထို glumness သည် PMO နှင့်လုံးဝမဆိုင်၊ ငါ့ဘဝသည်f* cked သာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်မှန်တယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကြောက်ရွံ့မှုရှိနေဆဲပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတောက်ပမှုအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ရှင်းပြချက်တစ်ခုလိုပဲ။
ဒီနတ်ဆိုးနှစ်ခုကငါနဲ့ပေါင်းပြီးကဲ့ရဲ့ကြတယ် တစ်ယောက်က“ ကလေး၊ မင်းရဲ့ P ပျောက်နေတဲ့အတွက်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာပေါ့!” ထို့နောက်အခြားတစ် ဦး က“ ဒါမှမဟုတ်ဒါက P မဟုတ်ဘူး! မင်းသာယာတဲ့ဘဝနဲ့အတူတူနေလို့မရတဲ့အတွက်မင်းဟာရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်ပဲ။ အပြန်အလှန်နှင့်သူတို့အကြားတစ်ကြိမ်နာရီအဘို့။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါနှစ် ဦး စလုံးမှားယွင်းတဲ့သက်သေပြ။ ငါထွက်။ မိန်းမနှင့်တွေ့ဆုံရန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတို့စကားပြောနေတာ၊ လန်းဆန်းတက်ကြွလာတာ၊ အတွင်းစိတ်ကအောင်မြင်မှုနဲ့ပုံမှန်ခံစားချက်တွေကိုရုတ်တရက်ခံစားရတယ်။ သို့သော်စွမ်းဆောင်ရည်ပြီးဆုံးချိန်တွင်မှိုင်းပျံနိုင်သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ပြန်လည်ကျရောက်ခဲ့သည်။ ကဗျာ
1) ငါဆီသို့ ဦး တည်တိုးတက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့သူမအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးသူမကချိုမြိန်ပြီးပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်လိမ့်မည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်သူမနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်ကဂရုမစိုက်ပါ။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောထွေးသည်အထိပြန်လုပ်ပါ။
၂) တစ်နေ့မှာငါတကယ်တက်လာမှာ၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်၊ ငါ့နှုတ်ခမ်းကနေရွှေစီးဝင်လာတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်ဟာငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ dolt တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှဘယ်သူ့ကိုမှကင်မရာပေးပြီးဘယ်သူမှဘယ်သူ့ကိုမှပေးဆပ်ခြင်းမရှိတဲ့သူကိုပေးသည်။ Self- ပုံရိပ်လုံးဝမတည်မငြိမ်သည်အထိပြန်လုပ်ပါ။
၃) တစ်နေ့မှာသူဟာကောင်လေးတစ်ယောက်လိုပဲကောင်လေးတစ်ယောက်လိုကောင်လေးတစ်ယောက်လိုနေပြီးတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီလို့ငါထင်လိမ့်မယ်။ နောက်နေ့တွင်သူသည်ရေကူးနေသည်ဟုထင်နေသောသူသည်လှည့်စားတတ်သောမိုက်မဲသူတစ် ဦး နှင့်တူလိမ့်မည်။ တကယ်တက်သည်အထိသည်အထိပြန်လုပ်ပါ။
[အပတ် 8] ဖြတ် PMO စေသည်အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်ကထွက်သွားပါနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်, သတ္တိဖြစ်ရန်သင့်အားမက်လုံးပေးပေးသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျ porn ဖို့နေ့တိုင်း whacking နေကြပြီး, တကယ့်အမြိုးသမီးတအနိုင်နိုင်သင်နှင့်အတူက register လုပ်သွားပါလျှင်အဘယျကွောငျ့မွကွေီးပျေါမှာသငျသညျကိုတောင်သွားနှင့်သူမ၏ပြောပြရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုစေမလဲ? သင်သည်အဘယ်သို့ရဖို့ရန်ရှိသည်သလဲ? အဘယ်အရာကိုမျှ။ သငျသညျဆုံးရှုံးဖို့ဘယျလိုရှိပါသလဲ? အရှက်၏ငြင်းပယ်ခံရ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ, သူမ၏ထံမှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ရန်လိုမုန်းတီးမှုနှင့်အမျက်ဒေါသ။
ဒါပေမဲ့မင်းသင်ကြိုက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုပါစို့၊ ငါမင်းကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀,၀၀၀ ပေးပြီးသူမနဲ့စကားပြောဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်၊ ဘာပဲပြောပြောဘာအရေးမကြီးဘူး။ ငါပေးဆပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှန်လျှင်သူမသည်သင်ရယ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်ပင်သူမနှင့်စကားပြောရန်သတ္တိရှိသည်။ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာလဲ ကျွန်တော့်ဒေါ်လာ ၁ သန်းကမ်းလှမ်းမှုမပါဘဲသူမပြုခဲ့သည့်အတိုင်းအတိအကျတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
ဆယ်ကျော်သက်စုံတွဲတစ်တွဲဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတို့ရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာအကောင်းဆုံးစက်ရုပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့တည်ဆောက်ပြီးသူမကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဟာသတွေကိုမင်းတို့သိလား။ PMO သည်၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှယောက်ျားတစ် ဦး တည်း မှလွဲ၍ သူသည်သူကိုယ်တိုင်မငြိမ်မသက်သောပူပြင်းသည့်အမျိုးသမီးများအားမိမိကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကသာမန်လောကမှာမြေအောက်ခန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့အခါသူတွေ့တဲ့သာမန်အမျိုးသမီးတွေကိုလုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ သူတို့ထံတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လာခြင်းသည်သူစဉ်းစားနိုင်သမျှဖြစ်သည်။
ရုံရုပ်ရှင်သူများလေးတွေလိုပဲကျွန်တော်မိန်းမဆောင်နဲ့မေတ္တာလဲသေကြပြီ။ ထိုသို့သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ဟာမိန်းမဆောင်ကိုမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်နှငျ့အညီပြုမူနေသည်ထင်၏။ သငျသညျအိမ်မှာဖြစ်ကြသည်အခါ, သငျသညျအသည်းအသန်သင့်ရဲ့မိန်းမဆောင်ထဲကနေမိန်းကလေးငယ်များ bang ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကွာတဲ့အခါ, သင်အိမ်ပြန်ရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။
ဤဖြစ်စဉ်သည်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤ HAREM နှင့်ခိုးဖောက်ခြင်းပါဝင်သည်။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကမင်းတို့ဟာမိန်းကလေးအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်၊ ​​သူတို့ကိုဘယ်တော့မှနောက်တဖန်မတွေ့ရဘူးဆိုတာကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်။ သင့် ဦး နှောက်ကသင့်ကို ၈ ပတ်ကြာတိုက်နေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိုင်တီဟာဒီနည်းကို HAREM မပျက်စေချင်ဘူး။ စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ငရဲ၊ ထုံခြင်း၊ တရားမ ၀ င်ခြင်းစသည်တို့ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သင့်အားသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့ပြန်သွားနိုင်ရန်တတ်နိုင်သမျှအဆိုးဝါးဆုံးသောငရဲအားဖြင့်သင်ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ငါ့ကြည့်ပါ ဦး ခံစားချက်ဇယား (အပေါ်) - ကျွန်တော့် ဦး နှောက်သည်ရက်သတ္တပတ် ၈ ပတ်လုံးလုံးရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအရာဝထ္ထုကို ဖြတ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
သို့သော်ထို့နောက်သင်သည်ရည်းစားတစ် ဦး နှင့်ပြိုကွဲသွားသကဲ့သို့ (ကောင်းစွာ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာအတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်အမှန်ပင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်) ကဲ့သို့တစ်နေ့တွင်သင်နိုးထပြီးအဖျားပျောက်သွားသည်။ ဦး နှောက်က“ အိုကေ။ ငါရပြီ။ sniff * ။ သူတို့တွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ * sniff * ... ဟေ့ - ဘဏ်မှာတန်းစီစောင့်နေတဲ့မိန်းမကချစ်စရာကောင်းတယ်။ ဟေးကလေး!" ထိုနည်းတူသင်တို့သည်ချမ်းသာရကြ၏။ သင်ဟာတကယ့်ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားပြီ၊ သင့်မှာအိမ်မှာမှော်အတတ်၊ စက်ရုပ်တန်ဆာမရှိ။
ငါရှက်စရာ / ပျော်စရာတစ်ခုခုမျှဝေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်လည်းတကယ်အရေးကြီးတယ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်တိတိကကျွန်ုပ်၌အလွန်အမင်းပြင်းထန်သောပျောက်ဆုံးနေသည့်ခံစားချက်ရှိသည် - မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ပြိုကွဲပြီးနောက်သင်ခံစားရသောခံစားချက်များကိုသင်သိသည်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာတီးမှုတ်နေတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ 'ငါ့သူငယ်ချင်းတွေဘာပဲပြောပြောမင်းငါ့ကိုလုံးဝမပျောက်ပါဘူး' ငါ YOUTube ပေါ်မှာကစားပြီးတော့နားကြပ်ပေါ်မှာနားထောင်ခဲ့တယ်။ ငါနှစ်နာရီကြာအောင်တပြိုင်နက်တည်းအော်ဟစ်ကာထပ်ခါထပ်ခါကစားခဲ့သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအပြာအားလုံး၌ကျွန်ုပ်ကြိုက်ခဲ့သောမိန်းကလေးများအားလုံး - ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးမိန်းကလေးများ - ကျွန်ုပ်နှင့်အရင်းနှီးဆုံး - - ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုလှိမ့်ထားသည်။ ငါသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ခင်ဗျားရဲ့ရည်းစားဟောင်းဟောင်းနဲ့သူမနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အခါခင်ဗျားရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာ။ ဒီတော့အင်း၊ ငါနှစ်နာရီလောက်ငိုခဲ့တယ်၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ငါဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ သူတို့ကတကယ်သွားပြီ
အထဲကအရက်ဆိုင်များတွင်ထိုညဉ့်ငါ3နံပါတ်များတယ်, ငါနောက်နေ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ထှကျသှားကွ၏။
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ် PMO ကိုဆက်မလုပ်ရန်ခက်ခဲလားဟုသင်မေးသည့်အခါ။ မဟုတ်ဘူး၊ တကယ်လွယ်တယ်။ ထိုမိန်းကလေးများသွားကြောင်းကျွန်ုပ် ဦး နှောက်သိသည်။ လက်ခံလိုက်ပြီ ကျွန်တော့်ကိုသူတို့ဆီပြန်လာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကအရှုံးပေးလိုက်တယ်။ ဆက်ပြီးသွားပါပြီ အခုငါအိမ်မှာရှိတုန်းက၊ လိင်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကသိတယ်။ ငါထွက်သွားတော့မိန်းမကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုတာကို ဦး နှောက်ကသိချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုမှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ M ဟာ menu မှာမရှိတော့တော့၊ option ကို။
သို့သော်ထိုအချက်ကိုရောက်ရန် ၈ ပတ်ကြာခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်သွေးထွက်သံယိုလူသတ်မှုအော်ဟစ်နေသည်။ တခါတရံမှာတော့သူကအော်ဟစ်သံကိုရပ်တန့်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါအော်ဟစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအဲဒါကနောက်တဖန်အော်ဟစ်လာတဲ့အခါငါ့ကိုတောင်ထိတ်လန့်စေနိုင်တယ်။
ဒါ့အပြင်တီဗီကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ပါလို့ပြောတယ် အိမ်မှာနေပြီးတီဗီမှာမိန်းမကောင်းတစ်ယောက်လာရင်မင်းရဲ့ ဦး နှောက်က“ ဟေ့! ငါ့ရည်းစားကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်သွေးအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Hummana-hummana-hummana ။ ” တဖန်သင်တို့အားလုံးနောက်တဖန်စိတ်လှုပ်ရှားရ။ အိမ်မှာမင်းကိုမိန်းမတွေမသေစေရဘူး။ ဘာမှမရှိဘူး အဘယ်သူမျှမတောက်ပ, အဘယ်သူမျှမမျက်နှာများ, အလောင်းတွေမရှိဘာမျှ။ အပြင်ဘက်ကမ္ဘာ - အမျိုးသမီးများ။ သင်၏အိမ် -f* ck ကဲ့သို့ပျင်းစရာ။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်လိုအပ်သည့်သတင်းကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာယောင်္ကျားကမရှိတော့ပါ။ သွားပြီ
[ရက်ပေါင်းတစ်စုံတွဲအကြာတွင်] ငါ 0-10 စကေးနဲ့ငါ့ခံစားချက်ကိုငါပေးနေတယ်။0ကလုံးဝ shitty၊ ၁၀ ကလုံးဝကြောက်စရာကောင်းတယ်။ 10 ခိုင်မြဲစွာကြီးလှ၏။ သင်သည်အဝေးပြေးလမ်းမ၌ 8mph နှုန်းဖြင့် BMW ကိုမောင်းနေသည်ဆိုပါစို့။ အင်ဂျင်ဟာပျော်ရွှင်စွာနဲ့အားကောင်းစေတာကိုကြားသိရပေမယ့်စက်ဘီးစီးနေတယ်၊ ​​အကယ်လို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်တစ်နာရီမိုင် ၁၂၀ အထိအလွယ်တကူတွန်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသင်သိတယ်။ သင်၏အင်ဂျင်သည်ထိုအင်ဂျင်နှင့်တူသောအခါ 80/120 သည်စွမ်းအားကောင်းသော၊ ပျော်ရွှင်သော၊
ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်သည်လွန်ခဲ့သော ၆ ရက်အတွင်း ၈ အောက်တွင်ကျဆင်းခြင်းမရှိပါ။ အပြာရောင်, doldrums, မရှိခြင်း, စိတ်ပျက်အားငယ် - အားလုံး GONE! ဤသည်, ငါ့အဖို့, အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ တခြားသူတွေရဲ့ reboot report ကိုဖတ်ရင်တောင်ငါ rebooting လုပ်ပြီးရင်တောင်မှအထူးသဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိရင်စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေလိမ့်မယ်လို့စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ငါဒီတစ်ပတ်မှာစိတ်ပျက်စရာမရှိဘူး၊ ခေတ္တစိတ်မဆိုးဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးမည်သူမဆိုအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောအရာများကိုတုံ့ပြန်သည်။ စိတ်ပျက်စရာအချိန်များ၌ပင်အဓိက၊ မပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအင်ရှိခဲ့သည်။ ငါ PMO အတက်နှင့်နှိမ့်ချ (နှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမစတင်မီသင်တန်း၏ထုံ) ဒါငါအဖြစ်အသုံးပြုသကဲ့သို့ငါဒါဟာအံ့သြဖွယ်နီးပါးမယုံနိုင်စရာခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာရှိပါတယ်။ အစိုင်အခဲအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ဓါတ်များ။
[မကြာမီဒီ post ပြီးနောက်ကနေသူ့နောက်ဆုံးစိတ်ဓါတ်များဇယားဒီ post ရဲ့အစမှာဖြစ်ပါတယ်]
[အပတ် 9] no MO of Day 57, P. of no ၆၄။ အောင်မြင်သော၊ သာမန်၊ ပုံမှန်လိင်၊ နှင့် ကွန်ဒုံး။
သမိုင်းကွန်ဒုံးသုံးတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ မကြာခဏဆိုသလိုဘယ်တော့မှလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါစိုက်ထူတာကိုဆုံးရှုံးရတော့မယ်၊ အဲဒါကိုထုတ်ဖို့လိုပြီးသုံးဖို့တောင်စဉ်းစားမိတယ်။ မကြာခဏဆုံးရှုံးမှုစိုက်ထူအပေါ်တင်ပြီးစိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်ကအတွင်းအပြင်မကြာခဏဆုံးရှုံးမှုစိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
မနေ့ည: လိင် စတင်. နှင့်ငါတို့သည်ထိုချောဆီအရည်ကြည်ရတဲ့အပေါ်ချောဆီအရည်ကြည်ချပြီး, လိင်ဆက်ဆံမှတဆင့်ချောဆီအရည်ကြည်လိုအပ်ရှာတွေ့စဉ်ခိုင်မာသော🙂ပေါ်တွင်ကွန်ဒုံးချပြီး, ကွန်ဒုံးထွက်ရတဲ့စဉ်အဖြစ်ခိုင်မာသောနေ၏။ စံပြတောင့်တင်း🙂ကျွန်မရဲ့စိုက်ထူနှင့်အတူအားလုံးတစ်နည်းနည်းနဲ့ပဲကကွန်ဒုံး shenanigans အားဖွငျ့အကြှနျုပျနှငျ့အတူနေဖို့မယ်လို့သိရုံဒါမှသဘာဝအများနှင့်ဖွင့်ခံရဆက်နွယ်နေကြောင်းကြီးနှင့်ဒါညာဘက်ခံစားရတယ်။
ပြီးတော့လိင်ဟာကွန်ဒုံးမရှိဘဲနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါကအဲဒီမှာဆင်း drive ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် sensitivity ကိုတိုးမြှင့်၏ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်သံသယ။ အရင်ကတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးတဲ့သူနဲ့ကွန်ဒုံးနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်လိုသည့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကွန်ဒုံးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အခြားတစ်ဖက်သို့ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်ထိုအတွေ့အကြုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပြောမိရန် ပို၍ ပျော်ရွှင်မိပါသည်
အော်ဂဇင်ကိုယ်နှိုက်: အလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်ပျော်စရာ။ ငါစိတ်ပူသောအရာတစုံတခုမျှမပေါ်။ ငါလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမလာနိုင်တော့ဘူး။ တကယ်တော့ငါကဒါကိုတောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ဒါကသာမန်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့တူတယ်။ ငါရောက်လာသောအခါ, ငါ့ ဦး ခေါင်းကိုပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းနှင့်ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုသွေးကြောများဖေါက်ခြင်းနှင့်ငါ '' 8 FUCKING အပတ် !! '' မအော်ဘဲ ငါထင်လိမ့်မယ်တူသောသူမ၏နားရွက်၌။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်လှပပြီးရင်းနှီးသော၊ အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောလိင်ဖြစ်သည်
ယောက်ျားများ, ဒီမှာကပ်။ သင်ဆီသို့ ဦး တည်ကြိုးပမ်းနေသည့်ရည်မှန်းချက်သည်တကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ငါကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတန်ဖိုးရှိ 100% ဖြစ်ပြီးစိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ ဤနေရာသည် ၃.၆ လနှင့် ၁၂ လလုံးလုံးဒုက္ခနှင့် bullshit ကိုဖြတ်သန်းရကျိုးနပ်မည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပါ။ ဒီဟာကိုကြာကြာမယူရဘူး ၂-၃ လကြာသင့်တယ် ဒါပေမယ့်တစ်နှစ်၊ ငရဲ ၅ နှစ်လောက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါဟာကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းပါစေ၊ ကြက်ကြင်ဖော်ချင်း🙂
[ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်] တကယ်တော့လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လမ်းပေါ်တွင်အခွင့်အရေးများပိုမိုရရှိခြင်းသည်အလွန်အမင်းဖြတ်တောက်ခံရပြီးစိတ်ပျက်စရာများကိုပင်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်း၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ မျှော်လင့်ချက်တွေပြောင်းသွားတယ်။ PMO အလွန်အလွန်စိတ်ပျက်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ဦး နှောက်ကို 'လိင်' (Porn သို့အမှန်တကယ်လှည့်စားခြင်း) ၏ကြီးမားသောအစားအစာတွင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်။ ၎င်းသည်ဒေါသပေါက်ကွဲပြီးခဏအကြာတွင်၎င်းသည်သင်၏အသက်တာတွင်လိင်အသစ်ပမာဏကိုစွန့်လွှတ်ပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့် - မင်းကမိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတဲ့အတွက်မင်းရဲ့ဘဝဟာပြောင်းလဲသွားတယ်။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရဲ့အနိမ့်ဆုံးနှုန်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ သင်၏လူမှုရေးအပြုအမူကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သင်ခံစားနေရသောပိုမိုပြင်းထန်သောလိင်ဆန္ဒကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် နေဆဲအဖြစ်အေးမြကိုဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအချိန်ယူရမည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုယုံပါ။
[နောက်ပိုင်း post ကိုတစ်စုံတွဲရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်] ငါသည်ငါ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတင်ဆက်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဆိုးရွားခံစားမိပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာငါကြက်၌ငါ့ညီအစ်ကိုတို့ကိုငါဒါပေးမယ့်အနေအထားဖြစ်၏အပြုသဘောသက်သေအထောက်အထားများရှိသည်ဖို့လိုခငျြ: မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူယမန်နေ့, လိင်။ ကွန်ဒုံးနှင့်အတူတပြိုင်နက်။
ဒီနေ့အခြားမိန်းကလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံပါ။ ကွန်ဒုံးပါသည့်နှစ်ကြိမ်၊ မိနစ် ၃၀ သာခြားပြီး (ကျွန်ုပ်သည်လူ ၄၀ ဖြစ်သည်) ဒါကြောင့်တင်းကြပ်စွာပြော, ကွန်ဒုံး 30 နှင့်အတူ။ အားလုံးစိုက်ထူအလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်ခဲယဉ်း, လုံးဝပြproblemနာမရှိဘဲထိန်းသိမ်းထား, ကွန်ဒုံးမိန်းကလေး၏အပြည့်အဝအပေါ်ကိုတင် (အမြဲတမ်းငါ့အဘို့အန္တရာယ်အမှတ်ဖြစ်လေ့ရှိ၏), ကွန်ဒုံးပေါ်ခဲ့သည်တခါ၌ငါ့အချိန်ကိုယူပြီး (ငါလေ့ကျင့် လျှင်မြန်စွာအလံစိုက်ထူပြန်လည်ရရှိရန်မျှော်လင့်) တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး၌ရ။
အိုး, လိင်လိင်တကယ်ခံစားရတယ်။ ကျန်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကွန်ဒုံးကိုပျော်ရွှင်စွာသုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာလိင်မဆက်ဆံဘူး၊ ငါကြက်ထဲမှာပိုပြီးထိခိုက်လွယ်တာသေချာတယ်၊ ငါကညင်ညင်သာသာဆုပ်ကိုင်ထားတယ်၊
ED အကြောင်းကိုမေးမြန်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ငါ ED ကြိုတင်မကပ်ထားဘူးလို့ထင်တယ်။ ဆိုလိုတာကငါ ED ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ အထူးသဖြင့်ကွန်ဒုံးသုံးဖို့လိုမယ်ဆိုတာငါသိရင်လိင်ကိုတောင်မသွားဘူး။ တကယ်တော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တောင်တောင်မလိုက်ခဲ့ဘူး။ လွန်ခဲ့သောနှစ်လကကျွန်ုပ်သည်ပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စိုက်ထူခြင်းမရှိဘဲအိပ်ရာထဲသို့တစ်နည်းနည်းဖြင့်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ငါဒီမှာငါ့လမ်းရှာတွေ့သောအခါပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းတို - ဟုတ်တယ်၊ ငါကကြောက်လို့လိင်ကိစ္စကိုရှောင်မသွားဘူးဆိုရင် ED ပိုများတာပေါ့။
အတှေ့အကွုံကို restart ၏တစ်ခုလုံးကိုဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ပါ
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး 38 ရက်ပေါင်း